यमुना पराजुली अधिकारी - कान्तिपुर समाचार
यमुना पराजुली अधिकारीका लेखहरु :
तब हामीलाई चैन कसरी हुन्छ ?
जबसम्म बालबालिकाले घरमा पिटाइ खान्छन्गल्ली गल्लीको फोहोरमा लडीबुडी गर्छन् विद्यालयमा गाली, चुटाई भेट्छन् तबसम्म मलाई चैन कसरी हुन्छ ? – गिजुभाई (भारतीय शिक्षाविद्)
पहिलो चरणको लकडाउन अन्त्य हुनु थोरै अगाडि हामी स्कुले साथी मिलेर फेसबुक मेसेन्जरमा एउटा ग्रुप बनाएका थियौं । सो ग्रुपमा हामी स्कुलका मात्र नभई बाल्यकालदेखि सँगै हुर्के–बढेका साथी थियौं । कोही त एउटै थालमा भात खाएका साथी पनि थियौं । ग्रुपमा राम्रोसँग गफ जम्न नपाउँदै लकडाउन खुकुलो भयो । सबै आआफ्ना काममा लागियो । कहिलेकाहीँ हाई–हेलोसिबाय केही भएन ।
सन् १९९० मा बनेको अमेरिकी सिनेमा ‘होम अलोन’ मैले भर्खरै हेरें, जसमा आठवर्षे बालकलाई प्रमुख पात्रका रूपमा उभ्याइएको छ । उक्त पात्र एक्लै खेल्ने, एकदमै छिटो रिसाउने र आफ्नै उमेरका कोहीसँग पनि घुलमिल नहुने स्वभावको छ । उसलाई अभिभावकले कुनै काम लगाउँदैनन् ।
बालबालिकालाई उपहार पुस्तक
रुसी लेखक अलेक्जेन्डर रास्किनले आफ्नी छोरी बिरामी भएको बेला बाल्यकालमा आफैंले भोगेका कथा सुनाउँदासुनाउँदै यति धेरै सुनाइसकेछन् कि पछि उनले ती कथाबाट पुस्तकै तयार गरे । कथामा आफ्नै दु:ख–सुख, हाँसो–रोदनहरू थिए । रास्किनकी छोरीलाई कान दुख्ने समस्या थियो । रात पर्नेबित्तिकै छोरीलाई सहनै नसक्ने गरी कान दुख्ने हुनाले त्यसबेला उनले कथाहरू सुनाउँदा रहेछन् ।
‘तिमी भाग्यमानी, छोरी त छैनन् !’
‘छोरी भएर जन्मिनु अभिशापै हो भने, बरिलै नजन्माइदेऊ सृष्टिले !’ साँच्चै मार्मिक लाग्छ मलाई यो गीतिपंक्ति । हुन पनि कस्तो यौनजन्य विकृति बढिरहेको हो हाम्रो समाजमा ! पाँच वर्ष पुग्न नपाउँदै बलात्कृत हुँदै छन् बालिकाहरू । प्रायः प्रत्येक दिन समाचारमा पढ्नै/सुन्नै नसकिने घटनाहरू हुन्छन् ।
छाउगोठ भत्काएर मात्रै के हुन्थ्यो !
छोटो समयकै अन्तरालमा पढ्न–सुन्न पाइरहिन्छन् छाउगोठसम्बन्धी समाचारहरू । ‘छाउगोठमा सर्पले डस्यो,’ ‘सुतेकै ठाउँमा मृत अवस्थामा फेला,’ ‘छाउ बसेकी आमासँगै बसेका साना बालबालिकाको बिजोग,’ ‘प्लास्टिक ओढेर रात काट्दै,’ ‘छाउ बसेकी महिला बलात्कृत’ जस्ता शीर्षकका समाचार पढेपछि मन–मुटु छियाछिया हुन्छ ।
बालबालिकालाई आमाको साथ
केही समयअघि कलेज जीवनका एक सहपाठीसँग म फेसबुकमा जोडिएँ । करिब सत्र–अठार वर्षपछाडि कुरा हुँदा हामीले यतिका समयसम्म सामाजिक सञ्जालमा आपसमा नजोडिएकामा अचम्म मान्यौं । कुराकानीका क्रममा थाहा भयो, उनी विदेश गएर पढीवरी नेपाल फर्केर जागिर खाँदै रहेछन् । उनको दुई वर्षको छोरो रहेछ ।